TIFF 2021: 'Hausi Mai Vangu' Anopa Kutya Kwemhuri
musha Anotyisa mafirimu TIFF 2021: 'Hausi Mai Vangu' Anopa Kutya Kwemhuri
by Kelly McNeely September 14, 2021 210 maonero
Munyori / director Kate Dolan's Hausi Mai Vangu kunotonhora kutora pane inochinja tsika yeIreland, uye yakasimba kwazvo yekutanga ficha. Yakagadzirwa pabhajeti diki uye yakagadzika kutenderera mutambo weSamhain, idhodhi inonakidza kubva kuDlan (ine firimu pfupi Catcalls inowanikwa paShudder, kune avo vanofarira).
Hausi Mai Vangu anotevera Char (Hazel Doupe), wechidiki akanyarara anorarama hupenyu hwekusurukirwa. Amai vake vasina murume Angela (Carolyn Bracken) anotambura kuburikidza nekushushikana kunowanzo kumuradzika pamubhedha uye kutadza kuita mabasa ake semubereki. Mushure memangwanani asingashande ebasa, Angela anoenda asipo, mota yake achinyumwa akasara mumunda. Pakudzoka kwake, anoita kunge… kwete chaizvo. Hunhu hwake, chimiro, uye hunhu zvese zvinoshanduka munzira dzinoonekwa kwazvo. Pane chimwe chinhu chisingazivikanwe nezvaamai, uye Char zvishoma nezvishoma anosvika kumagumo anotyisa. Ava havasi amai vake.
Doupe naBracken vane kemisitiri inoshamisa inochinja sezvo firimu iri kufambira mberi. Mune zviitiko zvekutanga, Char naAngela vane madziro anoonekwa pakati pavo ayo anotaurisa nhoroondo inosiririsa; Angela akavigwa kuseri kwematanda uye zvidimbu zvemarara, uye Char anga abva kare kuyedza kumuburitsa.
Angela paanoonekazve mushure mekushayikwa kwake kusinganzwisisike, Char haazive mabvumiro atingaite amai vake nekukurumidza uye kusatarisirwa. Kunge chero mwana akasiyiwa, anofara kuti amai vake vakaita kunge vadzokera kwaari - pamoyo varipo uye vachimudururira murudo rwaakarasikirwa zvakanyanya. Asi panguva imwechete, pane kusada kutenda zvechokwadi mazviri. Doupe anokatyamadza kwazvo muchiratidzo chake cheaya anokwikwidza manzwiro. Anotakura kusagadzikana kunoshandura kutya zvakanyanya sezvo Angela anova asingazivikanwe zvachose muhunhu hwake.
Bracken inoshamisa, ichiwedzera huwandu hwese hwekunzwa nehukuru hwakasiyana. Iye anozvikanda iye amene mune iro basa - panyama uye nepfungwa - pamwe nekuita uko kunenge kuri hypnotic mukudzika kwayo. Vatambi vanosanganisira Ingrid Craigie saRita (amai vaAngela naambuya vaChar), muchengeti wepachivande wemhuri. Rita anobata kugona kwakasakadzwa nemakore ekusagadzikana mumuviri uye mutoro wepfungwa. Hunhu hwake anonzwa kunge tad akashandiswa, asi kutaura chokwadi, haisiyo nyaya yake yatiri kutarisa nezvayo.
Hausi Mai Vangu mukadzi-anotungamira firimu, aine anonyanya vakadzi cast uye hurukuro diki kwazvo yevanhurume vatambi; isu hatinzwe nezve baba vaChar, uye hapana chikonzero chisingadiwe cherudo parutivi, ingotarisana nehukama hwevakadzi. Mumwe wevanodheerera vaChar, Suzanne (Jordanne Jones), anononoka kubatana naChar pamusoro penyaya yavo yakawiriranwa nehupenyu hwemhuri hunonetsa. Hapana imwe nguva iyo Suzanne asina chokwadi kana kuramba Char, anongova shamwari yechokwadi, inonzwira tsitsi, iyo Char inoda kwazvo.
Isu takamboona iyo ichichinja lore kare mukutya (senge zvakafanana mafirimu eIreland Iyo Hallow uye Horo muvhu), asi pane chimwe chinhu pamusoro pekuita uyo anofungidzirwa kuti akaipa mai - pane kuita mwana kana chimwe chimiro - izvo zvinonyanya kushanda.
Angela anoshandura mukati mese firimu, achiwedzera kunetsekana nekufamba kwenguva. Char anoona aya maitiro asinganzwisisike, asi zvakaoma kubvuma kuti chimwe chinhu chingangove chisina kunaka. Zvisinei nematambudziko avo, Char anoda amai vake, uye kunyangwe zviito zvake zvine chekuita uye zvisina chokwadi, zvakatooma kutora mhedzisiro yekuti panogona kunge paine chimwe chinhu chinoshamisa mukusanganisa, kunyanya nenhoroondo yaamai vake vepfungwa.
SaNatalie Erika James ' Relic, Hausi Mai Vangu kurwisana nehutano hwepfungwa uye mutoro uye basa pakati pemubereki nemwana. Dolan anozvinyora izvi nekungwarira uye nekunzwira tsitsi kukuru Char mudiki, uyo anonzwa kusurukirwa uye akasurukirwa kunyangwe paine rutsigiro kuvapo kwababamunini naambuya uye kuyedza kubva kumudzidzisi wake kuchikoro.
Kubva pane iyo melancholic mamaki kune yakavhurika asi yepedyo cinematography, Hausi Mai Vangu ine toni yemuchadenga inotamba yakatenderedza nhamo, asi isingambopa zvizere. Firimu reDolan rine simba reSamhain bonfire: rinotsemuka uye rinopisa, nekupfunga kwekuputa kunorumbidza mweya weHalloween.
Ini ndinoda yakanaka "hudiki mungozi" inotyisa, uye Hausi Mai Vangu ine chishandiso chakanyatsogadzirwa zvine hunyanzvi uye chakayerwa-zvakanaka chetrope iyoyo. Hunhu hunofambiswa nekuvhuvhuta kuuya-kwe-zera ngano ine zvigadzirwa zvakagadzirwa zvakanaka zvinovimba nekuita, kwete migomo yeropa.
Kana iwe uchitsvaga iyo stellar doppelgänger mbiri chimiro, bhara iyi ne Horo muvhu. Hauzombotarisa nhengo dzemhuri yako nenzira imwechete zvakare.
Kuti uwane zvimwe kubva kuTIFF 2021, tarisa yedu ongororo yaRob Savage's Dashcam